Kismaayo News » Yugandha oo ciidamo dheeraad ah u soo diraysa Soomaaliya
Yugandha oo ciidamo dheeraad ah u soo diraysa Soomaaliya
Kn: Dawladda Yugandha ayaa shaacisay inay ciidamo gaaraya 5000 u soo dirayso Soomaaliya kuwaasi oo ka baxsan hawlagalka nabad ilaalinta AMISON.
Afhayeenka milatariga iyo difaaca Yugandha, Brig. Richard Karemire ayaa saxaafadda u sheegay inuu dal kiisu diyaar la yahay ciidamo 5000 iyo ka badan oo ka qaby qaata cirib tirka kooxda Alshabaab.
Madaxweyne Museveni ayaa kala xaajooday Donald Yamamoto, siihayaya kaaliyaha xoghayaha arimada dibadda Maraykanka u qaabilsan arimaha Africa sidii a dhaqaale ugu heli lahaayeen ciidamada cusub ee ay rabaan inay u diraan Soomaaliya. Museveni ayaa u sheegay Yamamoto inay ciidamada diri doonaan hadii ay beesha caalamka ka helaan kaalmo dhaqaale oo joogta ah iyo qalab ciidan oo ay ku jiraan diyaaradaha qumaatiga u kaca.
Arinta ay Yugaandha ciidamo dheeraad ah ugu dirayso Soomaaliya ayaa ku soo aadaysa maalmo uun kadib markii ergayga midowga Afrika u qaabilsan Soomaalilya uu shaaciyay in tirada ciidamada AMISON la dhimaayo loona diyaarinaayo inay dabayaaqada sanadka soo socda guud ahaan isaga baxaan Soomaaliya. Sidoo kale todobaadkii hore waxaa si hor leh u soo galay ciidamo Itoobiyaan ah oo ayaguna aan wadan magaca AMISON.
Hadaba hadii uu qorshuhu ahaa in ciidamo qaran lagu diyaariyo mudo sanad ah si ciidamada AMISON xilka ugu wareejiyaan, waxaa muuqda ifafaalo kaasi ka duwan oo ciidamo dheeraad ah dalka loogu soo daabulayo kuwaasi oo ay ku baxayaan dhaqaale aad u badan, taasi oo cirka ku sii laalaysa in dhaqaale lagu dhiso loo helo ciidan qaran oo Soomaalia leedahay oo mustaqbalka hanta amaanka dalka.